Milicsiga Taariikhda Faneed Ee Cabdi Cali Bacalwaan: Mid Ka Mid Ah Fannaaniintii Loogu Jeclaa Hoballada Waaberi — Q:7aad | FooreNews
Home wararka Milicsiga Taariikhda Faneed Ee Cabdi Cali Bacalwaan: Mid Ka Mid Ah Fannaaniintii Loogu Jeclaa Hoballada Waaberi — Q:7aad
Waxa aannu ka raadin jirnay xusaska Oktoobarta marka la xusayo ee dugsiyada ay ardayadu ka qaadayaan heesaha waddaniga ah. Gabadh kasta oo naloogu sheego dugsiga ayaanu u tagnaa kadib kabanka ayaan u qaadanaa oo heeso ku tijaabinaa kadib waxaannu aragnay in gabadhan Khadri noqon karto gabadh si wanaagsan u heesi karta. Khadra waxa aannu ku nidhi na soo mar. kadib way noo timid oo gurigii fannaaniinta ayay timid. Midhihii aan hayay ee Heestii ‘Afka Lagama Sheegto’ ayaan samaynay markiiba. Iyadiina waan xaffidsiinay. Kadib way qaadday sidaasi ayaan ku qaadanay oo ay tijaabadii ku gudubtay. Sidii ayaan Khadra ku soo qaadanay waxaanan u sheegnay in ay u diyaar garawdo hawshaasi adag ee ah in ay ka qayb qaadato Riwaayadda ‘Dab Jacayl Kariwaa’. Waxa aannu ku nidhi habeenna adiga ayaa dhigaya habeenna waxa dhigaysa Fannaanadda Sahra Axmed Jaamac. Sidii ayay heesihii ku jiray iyo geeraaradii ku xafiday oo ay dheg kaga siisay. Riwaayaddii sidaasi ayaannu ku qaadnay oo waxa la sii marinayaa dhinaca dhulka. Wadada isku xidha Hargeysa iyo Xamar si magaalooyinka u dhaxeeya oo dhan loogu sii dhigo. Waxaan sidaa ku go’aansannay in habeenna ay Khadra doorkeeda dhigto habeenna Sahra si ugu dambayn Sahra u nasato oo Khadka loogu baddalo booskeeda. Qorshihii sidaasi ayuu noqday oo waxa aannu ku nidhi Sahra Axmed marka aanu Muqdisho tagno diyaaradda ayaannu dib kaa soo saaraynaa si aan xaggan ugu umushid. Mudada aanu Konfur joognana waxa nala dhigaysa Khadra Daahir. Sidaasi ayay ahayd qisada halka ay ka timid in aad heesaha Riwaayaddaasi ku jirna marna ku maqashaan Sahra Axmed marna ku maqashaan Khadra Daahir. Sidii ayaannu Xamar ku tagnay iyada oo gabadhii Khadra Daahir sidaa u dananaysa oo aanay jirin wax celin karaaba. Labadii heesood ee ay Sahra Axmed Jaamac ila qaadaysay ee kala ahaa ‘Laqanyada Jacaylka iyo heestii kale ee ‘Faraskaagii laga badi’ ayay booskii Khadri gashay oo ay ila qaadaysaa. Markii aannu Muqdisho gaynay Riwaayadda ayaa wax kale isla daayoo wax alla wixii fannaaniintii Muqdisho joogay ay Tiyaatarka isugu yimaaddaan oo waxa la daawanayaa gabadhaasi Cusub ee Khadra Daahir. Codkeeda iyo qaabka ay riwaayadda u jilayso ayaa laga mabsuuday oo la jeclaystay.” Ayuu yidhi Fannaan Cabdi Calo Bacalwaan.
Imikana bal een soo qaadano Midhaha Heesta Faraskaagii laga badi ee ku jirtay Riwaayaddaasi ‘Dab Jacayl Kariwaa’ ee ay wada qaadeen Cabdi Cali Bacalwaan iyo Sahra Axmed Jaamac marka dambena ay la qaadayso Khadra Daahir Cige. Waa Midhihii Xasan Xaaji Cabdilaahi ‘Geney’
Fiiradiisu Badan Tahay
Feedha Isku Joojeen
Fadka Miidhan Yeeshee
Fooshii Aan Da’in Iyo
Ma Faraaci Baad Tahay
Sawdigaa Ka Faro Baxay
Baydta Sahra Axmed:
Waar Ma Faaliyaad Tahay
Maxaa Falaga Kugu Diray
Faraskaagii Laga Badi.
Faraskaygii Laga Tagay
Adigaa Fidmada Wada
Fan Jacayl Ma Guuree
Nabarkaagii Fiix Noqtay
Sawdigaa Ka Fara Baxay
Waan Kaa Fogeeyo
Waxa Aanad Filanayn
Warku Sida Falaadhii
Wuu Kaa Fajiciyaa
Marta Boogta Aan Daro
Aan Furfure Waxaa Dhacay
Faalada Markaan Nabar
U Fadhiistay Kaligay
Faraskaagii Laga Badi
Faraskaagii Laga Badi’
Previous PostBeesha Caalamka Oo Darsaysa Hogaaminta Cusub Ee Somaliland Iyo Muuse Biixi Oo Laba Cisho Oo Isku Xigta Qaabilay Wufuud Culus Oo Ka Kala Socotay Dunida Next PostXildhibaan Shaaca Ka Qaaday Malaayiin Dollar Oo World Bank Ku Caawiyay Somaliland Oo La Musuq Maasuqay, SDF-na Ku Eedeeyay Inay Gacan Wayn Ka Gaysatay Musuqa